Wafdi uu horkacaayo madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta gaaray magaalada Kismaayo (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu horkacaayo madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta gaaray magaalada Kismaayo (AKHRISO)
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose, halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay.
Socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh ee magaalada Kismaayo ayaa la sheegayaa inuu la xiriiro olole doorasho uu ku doonayo inuu ku kasbado xildhibaanada lagu soo doortay magaaladaas, waxayna tani ka dambeysay kadib markii musharixiin uu ka mid yahay Cumar C/rashiid ay halkaasi booqdeen.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa lagu wadaa inuu halkaasi kulamo kula yeesho madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe, iyo xildhibaanada labada gole ee lagu soo doortay magaalada Kismaayo.
Warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn heshay ayaa sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh uu doonayo arrinta la xiriirta sidii xildhibaanada la doortay uu uga heli lahaa codka, markii la gaaro doorashada.
Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa olole xoogan ugu jira sidii uu ku heli lahaa codka xildhibaanada baarlamaanka, waxaase muuqata in safarkaan uu jawaab u yahay safarkii uu maalmo kahor halkaasi uu ku tagay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la sheegayaa inuu si aad uga carooday hadal dhawaan ka soo yeeray ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke oo uu xildhibaanada Kismaayo ku sugan u sheegay in loo baahan yahay isbedel lagu sameeyo madaxweynaha dalka, isagoo ku eedeeyay inuusan laheyn aragti dheer, dalkana u horseeday dib u dhac iyo isqabqasi siyaasadeed.